သူ့ကိုကြည့်၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » သူ့ကိုကြည့်၍	10
Posted by aye.kk on Aug 11, 2015 in My Dear Diary, Photography | 10 comments
Ma Ma says: ပေါက်ဖတ်ကောင်လို့ ခေါ်တယ်ထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: မငီးးး
kai says: အဲဒီကနေ..လိပ်ပြာဖြစ်ပြီး.. မိခင်သဘာဝကို အလှဆင်မလားမသိ…
အရင်ကတော့.. လောကမှာ.. ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့.. သတ္တ၀ါရယ်လို့မရှိစကောင်းဖူး.. ထင်ခဲ့..
လောကမှာ.. ကောင်းကျိုးမပေးတတ်တဲ့..သတ္တ၀ါရယ်လို့.. ရှိတယ်လို့.. သိပ္ပံကတွေ့ပြီး.. မျိုးဖြုတ်/မျိုးပြောင်းကြဖို့လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာပဲ..
ပြောင်းလက်စနဲ့.. လူရဲ့.. အတ္တကို မျိုးရိုးဗီဇထဲကထုတ်ပစ်လိုက်လည်း.. ကောင်းနိုင်သား.. http://www.wired.com/2015/07/crispr-dna-editing-2/
Easy DNA Editing Will Remake the World. Buckle Up. They were worried about what people called “recombinant DNA,” the manipulation of the source code of life. It had been just 22 years since James Watson, Francis Crick, and Rosalind Franklin described what DNA was—deoxyribonucleic acid, four different structures called bases stuck toabackbone of sugar and phosphate, in sequences thousands of bases long. DNA is what genes are made of, and genes are the basis of heredity.
အောင် မိုးသူ says: အောင်မငီးးးးးးးးးးးး အသည်းတွေယားလိုက်တာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်ပါတယ် အမအေး။ သဘာဝတရားတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အလှနဲ့ကိုယ်။ လူတိုင်းမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် အရည်အသွေးနဲ့ကိုယ်။ အလှကိုယ်စီ ရှိကြပါသည်။
Mike says: .ပေါက်ဖတ်ကောင်တွေ ရှမ်းပြည်ဖက်တော့အတွေ့ရများတယ်…လှတော့လှတယ်
.ကြည့်ရတာတော့အသဲယားစရာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: .ကောင်ကောင်ရီးးးးး
manawphyulay says: အလှကိုယ်စီ ရှိကြသူတိုင်းတွင်
အလှတရားကို အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်အောင် မဖန်တီးဖို့တော့ သတိပြုရမှာပေါ့နော်…
aye.kk says: ညီမမျှစ်ရေ